Full fonosana for FS2004 (modely, virtoaly cockpit sy feo) avy amin'ny efatra textures: Air France (faritra), United Express, USAir Express (ara-tantara), Canarias Provincial. Zava-dehibe ny mamaky ny boky tafiditra ao anatin'ny fonosana ity.
Ny Embraer 120 Brasilia dia kambana turboprop fiaramanidina amin'ny seza 30 vokarina avy Embraer in Sao Jose dos Campos ao amin'ny fanjakan'i São Paulo.
Izany no Powered by roa turbines PW118B Pratt & Whitney, samy nanolotra 1,800 HP amin'ny lavaka. Ny hafainganam-pandeha dia manodidina cruising 300 fatotra (555 mph) ary manana isan-karazany ny 800 nm (1,481 km) amin'ny feno entana. Ny valin-drihana no 32,000 miasa tongotra (9,754 m), na dia tsy voasokajy RVSM, dia voafetra ny 29,000 tongotra any Eoropa.
Mihoatra ny 350 dika mitovy ity dia naorina fiaramanidina. Eoropa airlines maro no ampiasaina toy ny mifandray amin'ny fiaramanidina ao Eoropa (Air Antananarivo, dat, DLT, Excel,-paritra, Atlantic Air Assistance). Izy dia hisolo ny EMB 135.